Posted on November 27, 2018 by Npnews
काठमाडौँ । नेपाल आमाकी छोरी श्रृंखला खतिवडाले मिस वर्ल्ड २०१८ को उपाधिको अब्बल प्रतिस्पर्धीको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरेर दुनिया चकित पारेकी छिन् । उनी अहिले भोटिङ मार्फत अन्तिम चयन हुने चरणमा पुगिसकेकी छिन् । उनलाई भोटपनि निक्कै आकर्षक आइरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दा समेत उनी अग्र स्थानमा छिन् । उनी मिस वर्ल्ड २०१८ भएमा उनीसँगै नेपाललाई विश्वले चिन्नेछ ।
अहिलेसम्म यो उपाधिको नजिक नेपालका कोहीपनि पुगेका थिएनन् । कात्तिक २३ गते शुक्रबार मिस वर्ल्ड २०१८ मा सहभागिता जनाउन चीनतर्फ उड्ने क्रममा श्रृंखलाले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै नेपाली झन्डा फहराउँदै एउटा आकर्षक तस्बिर पोस्ट गरिन् ।
उक्त तस्विरले धेरैको मन जितिरहेको छ । तस्बिरसँगै उनले लेखेकी थिइन् नेपाल, म तिमीलाई गौरवान्वित बनाउनेछु, यो मेरो वाचा भयो अर्थात् नेपाल, आई विल डू यू प्राउड, प्रमिस । स्टाटससँगै श्रृंखलाले आफ्नो मिस वर्ल्डको यात्रा प्रारम्भ भएको जानकारीसमेत गराएकी छिन् ।
मिस वर्ल्ड २०१८ को निर्णायक प्रतियोगिताअघि विभिन्न युट्युब च्यानलले यो वर्षको सम्भावित विजेताका बारेमा अनुमान लगाउन थालिसकेका छन् । मिस वर्ल्ड अन्तर्गतका विभिन्न चरणका प्रतियोगिता सञ्चालन भैरहेका बेला अध्ययनकर्ताहरूले नेपाली चेली श्रृंखलाले मिस वर्ल्डको उपाधि नै जित्न सक्ने अनुमान गरेका हुन् ।
श्रृंखलाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आफूलाई अनलाइन भोट गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूसमक्ष आग्रहसमेत गरेकी छिन् । त्यसका लागि मोबाइलमा मोबस्टारको एप डाउनलोड गरेर श्रृंखला खतिवडाको पेजमा गै उनलाई फलो गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि उनको पोस्टमा गएर मोबाइलको स्क्रिनलाई देब्रेबाट दाहिनेतर्फ स्विप गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नेबित्तिकै ‘यस’ लेखिएको देखिने छ । उक्त शब्द देखिनु भनेकै श्रृंखलाले एकमत प्राप्त गर्नु हो । त्यसका लागि प्रत्येक दिन उक्त एपमा गएर उनका हरेक पोस्टमा कमेन्ट समेत गर्नुपर्नेछ । यसरी भोट गर्दा सबैभन्दा बढी मत पाउने सुन्दरीले मिस वर्ल्डको एउटा महत्वपूर्ण विधा मल्टिमिडियाको उपाधि जित्नेछिन् ।
शृंखला खतिवडाले सार्बजनिक गरिन यस्तो तस्बिर, जहा विश्वभरका मिसहरु पार्कमा रमाइलो गर्दैछन (फोटो फिचर)
काठमाडौँ । मिस वर्ल्ड २०१८ को प्रतिष्पर्धामा रहेकी नेपाली चेली शृंखला खतिवडाले केहि रमाइलो तस्बिरहरु सार्बजनिक गरेकी छिन । उनि लगायत उनको टिम चिनको हैकोउ क्षेत्रमा रहेको वेटल्याण्डमा घुम्नु जादा खिचिएको केहि तस्बिरहरु मिस वर्ल्ड नेपालको फेसबुक मार्फत सार्बजनिक भएको थियो । जुन तस्बिर शृंखला स्वयमले खिचेकी हुन् । उनले फोटो सार्बजनिक गर्दै लेखेकी छिन –
We visited the wetland park in Haikou this morning. Haikou was honored as an international wetland city two months ago. Was amazed to find out that the 14,000 sq.m of land is capable of treating 5000 ton of waste water per day. The public life is thriving in and around the park, it’s added on to the beauty of the city and directly promotes Hainan’s promise to make it an environment friendly province. What an incredible example to the rest of the world ❤️
तस्बिरहरु हेर्नुहोस ”
नेपाली चेली शृङ्खला मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धाको सेमिफाइनलमा
काठमाडौं, ६ मङ्सिर । नेपाली चेली शृंखला खतिवडा मिस वोर्ल्ड २०१८ को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन। विश्वभरबाट १ सय २१ देशका सुन्दरी सहभागी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ३० मा छनोट भएकी शृङ्खला सेमिफाइनलमा पुगेकी हुन् ।
शृंखलाले बिहीबार साँझ फेसबुकमार्फत् आफू सेमिफाइनलमा पुगेको बताएकी हुन् । टप मोडेल विधा अन्तर्गत उनी सेमिफाइनलमा पुगेकी हुन्।
मकवानपुर घर भएकी २२ वर्षीय शृंखला खतिवडा समाजसेवी पनि हुन् । उनि पेशाले भने इन्जिनियर हुन् भने प्रतिष्ठित इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोक टपर पनि हुन् । उनको उचाई ५ फित साढे ७ इन्च रहेको छ । २४ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै शृंखलाले ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ को उपाधि हात परेकी थिइन् ।
मिस वोर्ल्ड २०१८ को सेमीफाइनलमा पुगेपछि शृंखलाले आफ्ना समर्थकहरुलाई भनेकी छिन – ‘सेमीमा प्रवेश गर्दा म अत्यन्त खुशी छु । प्रतिस्पर्धाको कठिन अवस्थालाई शानदार तरिकाले अवस्थालाई सम्हाल्न सकेकोमा प्रतिस्पर्धीले मलाई बधाई दिएका थिए’, उनले लेखेकी छन्, ‘नेपालीले दिएको माया र विश्वासप्रति आभार प्रकट गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
अशोकका साथी भुईकटहरेको दुःखका दिन गए (हेर्नुहोस् भिडियो)